MACLUUMAADKA TARANKA CHIPIN DOG IYO SAWIRRO - EEYAHA
Macluumaadka Taranka Chipin Dog iyo Sawirro
Chihuahua / Ginada Yar ee Eeyaha eey Isku Darka Yihiin
Ruby the Chipin waa ¾ Chihuahua iyo Pin Min Pin
Chipin ma aha eey saafi ah. Waa iskutallaab udhaxeysa Chihuahua iyo Min Pin . Habka ugu wanaagsan ee lagu go'aaminayo dabeecadda nooc isku dhafan ayaa ah inaad ka raadiso dhammaan noocyada iskutallaabta isla markaana aad ogaato inaad ka heli karto isku-darka mid kasta oo ka mid ah astaamaha laga helo nooc kasta. Maahan in eeyeyaashan eyda isku dhafan ee la dhalayey yihiin 50% nadiif ah ilaa 50% saafi ah. Aad bay caan u tahay in kuwa wax soosaara ay tarmaan iskutallaab badan .
yorkie shihtzu iskudhaaf iib ah
'Kani waa Koda oo jira 1 1/2 sano jir. Iyadu waa isku darka Min Pin / Chi. Waxaan ka soo korsannay Petco markay ahayd 6 bilood. Boodka, orodka iyo dabaasha ayaa ah nashaadaad maalinle ah oo loogu talagalay ardaygan firfircoon. Inta ugu badan, gabadhani waxay jeceshahay inay wax cunto, inbadan waxay baratay sida loogu boodo miisaska dushiisa iyo waxkasta oo araga lagu cuno! In kasta oo cabbirkeedu yaryahay, haddana waxay jeceshahay inay agjoogto gawaarida waaweyn ee waddooyinka ka baxsan, oo ay ku jiraan aabbeheed gaari xamuul ah oo aan dhib ku qabin inay u booddo wax alla wixii Sidoo kale, wadista baabuurka aabbeheed. Waxay sidoo kale jeceshahay inay u labisto Halloween. Markay tahay hurdada (ka dib maalinteedii dheerayd ee ay ciyaaraysay), waa inay ku hoos jirtaa daboolida adiga kugu xigta (waa sariir weyn oo sariirta!)
'Kani waa Gulley eey Chipin ah oo jirta 8 toddobaad! Wuxuu dhashay maalinta Kirismaska. Wuxuu ku nool yahay Massachusetts, laakiin wuxuu ka yimid Fargo, ND. Isagu waa nin yar oo cabsi badan, oo nolol iyo tamar ka buuxo. Wuxuu jecel yahay inuu leexiyo lugaha dadka, wuxuuna ku nool yahay guri weyn oo la seexdo oo ay ka buuxaan gabdho da 'yar oo xiranaya flip-flops, sidaa darteed isagu had iyo jeer wuu faraxsan yahay! Waxyaabaha uu jecel yahay Gulley inuu sameeyo ayaa ah inuu gacantiisa ku taabto oo ku taabto wejiyada dadka baalashiisa, sida qof yar. Hadduusan taas samaynayn, wuxuu u fadhiyaa daaqadda sida bisadda oo kale, wuxuu daawanayaa adduunka oo maraya! Hadda wuxuu jiraa 6 bilood miisaankiisuna waa 9 rodol, oo wuxuu leeyahay dhogorta ugu jilicsan, ugu dhalaalka badan! Gulley wuxuu jecel yahay in calooshiisa la xoqo, haddii aad siisid alaab jilicsan, wuxuu noqon doonaa saaxiibkaaga ugu fiican nolosha :) '
'Tani waa noo Zoee, Chipinkeenna (Chihuahua / Miniature Pinscher mixed breed). Waxay miisaankeedu yahay 3 rodol. waxaana lagu qiyaasaa culeyskiisa 7-8 rodol. markii uu weynaaday. Isku-dhafkan ayaa u muuqda inuu jecel yahay inuu yahay eey dhab ah, aad loo jeclaan karo, dhakhso leh, firfircoon, nidaam qaylo-dhaan oo weyn, aad u caqli badan oo jecel inuu xado waxyaabaha lagu dhejiyo kabahaaga teniska.
Bruno the Chipin (oo lagu naanayso Cheekie) oo qiyaastii 2 jir ah, culeyskiisuna yahay 16 rodol - 'Isagu waa 50% Chihuahua iyo 50% Min Pin.'
Minnie the Chipin puppy (Chihuahua Min Pin mix) oo jirta 6 bilood - milkiilaheeda ayaa leh, Iyadu waa eeyga ugu macaan uguna ciyaarta badan.
Zoey isku darka Chihuahua / Min Pin (Chipin) - 'Sawir gacmeedkan waxay ahayd 9 bilood jir, 18' dherer, 12 'garbaha dhexdeeda oo miisaankeedu ahaa 8 rodol.'
Snoop the Chipin (Min Pin / Chihuahua mx breed dog) at 9 bilood jir
Buddy the Chi-Pin da'da 4 sano jir— 'Waa kan 15-kii rodol ee Chi-Pin' Buddy '. Aad u dhakhso badan, isaga ayaa ku xiray baaskiilkeyga wadada 26mph orod. Isagu waa eey hoy ah tan iyo markaas waxaan qabanay tababarkii ugu badnaa ee Cesar Millan isagaana noqday qof dabeecad yar. Wuxuu jecel yahay inuu la ordo eeyo waaweyn oo dheereeya dhibna kuma qabo inuu u sheego markay khadka ka baxaan. Markuu ordi waayo qorraxda ayuu maydhayaa maalintii oo dhan. Farxad kama heli kareyn eeyaha caynkaas ah. Waxaan raadin doonaa isku-darkaan mustaqbalka! '
'Tani waa Shyla. Iyadu waa jacaylka 2-jir ee noloshayda! Dhab ahaan, iyadu waa kii abid ugu quruxda badnaa. Miisaankeedu yahay 5.5 lbs., Eygan wuxuu u egyahay daanyeer ka eeyga. Dadka ka maqlaya iyada oo hoosta igala socota aniga ayaa u maleeyay inay tahay ilmo yar, shimbir, bisad, iwm sida ay u hadleyso oo ay iigu qeylineyso. Iyadu waa qof saaxiibtinimo leh laakiin sidoo kale aad u xishood badan, sidaa darteed magaceeda, Shyla. Waxay mooddaa inay bisad tahay, oo si isku mid ah ayey u wada jeceshahay bisadaha iyo eyda. Waa bini'aadamka iyada ugu xishood badan! '
'Kani waa Ritzy, oo ah badh Chihuahua iyo badh Min Pin (Chipin). Waxay tahay 3 sano jir ah sawirkan, waxay jeceshahay dadka waxayna jeceshahay fiiro gaar ah. '
Eeg tusaalooyin badan oo ah Chipin
Sawirada Chipin 1
Sawirada Chipin 2
pitbull buluug sanka isku darka bulldog Maraykanka
sawirro yaryar eey adhijirro australia ah
bulldog american ah oo lagu qasay feeryahan
belgian malinois x Jarmalka adhijirka
i tus digaag dibi